Global Voices teny Malagasy » Bilaogera Notorian’ny Bankim-pirenena ao Kenya Noho Ny Lahatsoratra Bilaogy “Manala-baraka” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Jona 2016 5:31 GMT 1	 · Mpanoratra Ndesanjo Macha Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Kenyà, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna
Bilaogera Kenyana Cyprian Nyakundi. Sary tao amin'ny pejiny Facebook.
Notorian'ny Bankim-pirenena ao Kenya ilay bilaogera Kenyana Cyprien Nyakundi noho izy nanoratra andian-dahatsoratra momba izay heverina fa kolikoly ao amin'ny banky, izay lazain'ity orinasa ara-bola lehibe indrindra ity ao amin'ny firenena ho fanalam-baraka. Nanomboka tamin'ity volana ity ny raharaham-pitsarana azy.
Tamin'ny volana Martsa tamin'ity taona ity, nangataka tamin'ny governoran'ny Banky Foiben'i Kenya sy ny Sekreteran'ny Kabinetran'ny Teknolojiam-baovao sy ny Fifandraisana (ICT) ny Bankim-pirenena ao Kenya (NBK) mba hirotsaka an-tsehatra amin'ny raharaha fanalam-baraka ny banky ao amin'ny aterineto.
Naneho ny ahiahiny ny banky manoloana ireo mpisera media sosialy mampiely vaovao manaratsy sy diso momba ny banky sy ny fikambanana ara-barotra hafa ao Kenya satria mandalo fotoan-tsarotra ny toekarena.
Nanoratra tany amin'ny Vaomieran'ny Media ihany koa ny banky mba hijery raha manana fahefana amin'ny bilaogy ny vaomiera ary niantso ny mpandresy lahatry ny orinasa sy ny orinasa voakasika mba hitady vahaolana ara-pitsarana maharitra amin'ny olana ateraky ny “bilaogy tsy misy fanarahan-dalàna” sy ny fampiasana media sosialy.
Notorian'ny banky ilay bilaogera mampiady hevitra Cyprian Nyakundi tamin'ity volana ity noho ny andian-dahatsoratra momba ny banky. Mamaritra ny tenany ho “bilaogera Kenyana liana amin'ny politika, fitantanana, hosoka amin'ny orinasa sy tantara mahaliana momba ny olombelona i Nyakundi.”
Tamin'ny voalohany nandefa fangatahana manokana  ny banky, mangataka amin'ny fitsarana  mba hanakana azy tsy hanoratra momba ny banky ao amin'ny bilaoginy, kaonty Twitter na sehatra media sosialy hafa.
Tamin'ny 6 Jiona, nanome didy vonjimaika ny fitsarana ary namela ny NBK mba hampahafantatra amin'ilay bilaogera ny fampitandreman'ny fitsarana amin'ny alalan'ny filazana an-gazety, mailaka sy ny kaonty WhatsApp-n'ilay bilaogera.
Ao Kenya, manome didy vonjimaika  mandritra ny fotoana voafetra ny fitsarana mba hanakanana ny andaniny tsy hanatanteraka asa na hetsika. Fomba fanao mahazatra amin'ny tranga fanalam-baraka izany.
Toy izao ny vakin'ny didy:
Pending the hearing and determination of the application inter partes, an interim injunction is hereby granted restraining the defendant (Cyprian Nyakundi) whether by himself, his agents or his employees from publishing or causing to be published any statements defamatory of the National Bank of Kenya, its shareholders, directors and or employees in any manner whatsoever on his blog page, Twitter handle or any other of his social media platform accounts whatsoever.
Miandry ny fitsarana sy ny fanapahan-kevitra amin'ny fangatahana eo amin'ny roa tonta, navoaka ny didy vonjimaika mandràra ny voampanga (Cyprien Nyakundi) na izy tenany, na ny iraka na ny mpiasany tsy hamoaka na hampamoaka fanambarana manala baraka ny Bankim-pirenen'i Kenya, ny tompon'ny petra-bolany, ny taleny sy ny mpiasany na amin'ny fomba inona na inona na izany ao amin'ny pejy bilaoginy, famantarana ao amin'ny Twitter na kaonty sehatra haino aman-jery sosialy hafa ananany.
Tamin'ny 16 Jiona ny fakana am-bavany voalohany.
Milaza fangalarana  nataon'ny mpitantana ambony tao amin'ny banky ny iray amin'ireo lahatsoratra voalaza. Nampiato mpitantana ambony enina ny NBK  tamin'ny fiandohan'ity taona ity, anisan'izany ny tale jeneraly mba hanatontosa fanamarinana taorian'ny fitomboana mampiahiahy tamin'ny trosa.
Miatrika raharaha roa hafa fanalam-baraka i Nyakundi.
Tamin'ny Jona 2015, notorian'ny  Safaricom, orinasa lehibe indrindra momba ny finday ao Kenya izy noho ny fanalam-baraka. Nahavita nahazo didy mandràra ilay bilaogera tsy hamoaka lahatsoratra hafa manala-baraka azy intsony ny Safaricom ary didy mibaiko ny fanesorana izay lahatsoratra rehetra manala-baraka ny Safaricom ao amin'ny bilaoginy.
Tamin'ny Septambra 2015, notorian'ny mpandraharaha Kenyana iray antsoina hoe Vimal Shah noho ny fanalam-baraka ihany koa i Nyakundi.
Tsy mahafantatra intsony ireo mpanara-baovao momba ny raharaha Nyakundi raha bilaogera voakarama amin'ny ady eo amin'ny samy orinasa ao Kenya izy na tsy manan-tsiny mpandalina ara-toakarena kendren'ireo orinasa lehibe mba atao ohatra ho an'ireo bilaogera hafa sy mpisera media sosialy manoratra tantara momba ny lohahevitra ara-toekarena.
Na inona na inona marina, ny sosokevitry ny banky hanamafy ny lazan'ny orinasa amin'ny alalan'ny lalàna vaovao dia fambara loza ho an'ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ity firenena Afrikanina Atsinanana ahitana mponina maherin'ny 45 tapitrisa ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/22/84362/
 nangataka : http://www.techweez.com/2016/03/01/national-bank-central-bank-request/
 fangatahana manokana: https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_parte
 mangataka amin'ny fitsarana: http://www.monitor.co.ke/2016/06/09/blogger-cyprian-nyakundi-sued-nbk-defamation/
 didy vonjimaika: http://www.kenyalawresourcecenter.org/2011/07/injunctions.html
 vakin'ny : http://www.businessdailyafrica.com/Corporate-News/Court-bars-blogger-Nyakundi-from-defaming-national-bank/-/539550/3242368/-/h30ejg/-/index.html
 Milaza fangalarana: http://cnyakundi.com/2015/11/rot-at-national-bank-of-kenya-a-tragedy-in-waiting/
 Nampiato mpitantana ambony enina ny NBK: http://www.standardmedia.co.ke/business/article/2000196666/national-bank-issues-profit-warning-a-day-after-suspending-six-executives
 notorian'ny : http://www.techweez.com/2015/06/24/cyprian-nyakundi-sued-safaricom/
 notorian'ny : http://www.monitor.co.ke/2015/09/03/vimal-shah-sues-blogger-cyprian-nyakundi-aly-khan-satchu-for-defamation/